QYOU Media mamorona fiaraha-miasa amin'ny fizarana tarika etnik etnik any Canada - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcaster ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Ny QYOU Media dia mamorona fizarana fiaraha-miasa amin'ny vondron-tarika etnik any Canada
Ny QYOU Media dia mamorona fizarana fiaraha-miasa amin'ny vondron-tarika etnik any Canada
Fifanarahana fizarana mandritra ny fotoana maharitra handroahana ny fahazoan-dàlana ho an'ny "The Q India" sy ny "Q Polska" amin'ny alàlan'ny fampielezam-poko lehibe indrindra manerantany
TORONTO ary Los Angeles, Novambra 7, 2019 - QYOU Media Inc. (TSXV: QYOU; OTCQB: QYOUF) dia nanambara fa niditra tao anaty fifanarahana fizarana fotoana maharitra ho an'ny tambajotra an-tsivaky ny "The Q India" sy "Q Polska", miaraka amin'ny vondrona Ethann Channels Group, ny fampielezam-peo lehibe indrindra eran'izao tontolo izao izay miasa amin'ny fahitalavitra 80 + fantsona avy amin'ny eran'izao tontolo izao, manompo ny isan-karazany any Canada, Etazonia, MENA ary Aostralia manerana ny vondrona 20 + fiteny.
I India sy i Polonina dia samy manana ny diaspora lehibe indrindra maneran-tany. Ny tombantombana farany dia hita fa mihoatra ny 15 tapitrisa Indiana miaina any ivelan'ny fireneny miaraka amin'ny 5 tapitrisa any Etazonia sy Kanada. I Polonina dia tombanana ho 20 tapitrisa mahery ny razambeny poloney mipetraka ivelan'ny tanindrazany (saika antsasaky ny haben'ny mponina teratany) misy 1 tapitrisa any Amerika Avaratra. Niorina tao 2004 ny vondrona Ethnic Channels mba hanomezana fandaharana fahitalavitra sy nomerika amin'ireto vondrom-piarahamonin'olom-piarahamonina ireto miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny fampielezam-baovao lehibe indrindra eran'izao tontolo izao.
Slava Levin, Tale Jeneralin'ny CEO sy Co-Mpanorina ny Vondron-drazana Ethnic: “Niambina ny fitomboan'ny‘ The Q India ’sy ny‘ Q Polska ’izahay noho ny fifandraisan'izy ireo amin'ireo mpiara-miombon'antoka ato amin'ny Nextologies. Ny haikadon'izy ireo hahatratra ny mpihaino tanora vaovao izay mijery telefaona fahitalavitra maro dia mety tsara rehefa manitatra ny serananay izahay manerana ny sehatra TV, OTT ary Mobile finday. Faly izahay mitondra ireo fantsona hiantsena ireo ary manantena fa hahita fahombiazana lehibe izy ireo ”.
Curt Marvis, CEO ary Co-Mpanorina ny QYOU Media sy The Q India dia nanamarika hoe: “Ny vondrona tarika ara-poko dia nametraka ny tenany ho mpitarika eo amin'izao tontolo izao hahatratrarana ireo mpihaino samihafa any amin'ny faritany manerana izao tontolo izao. Rehefa mampitombo ny lanjan'ny fantsona sy marika any amin'ny faritany misy azy isika, dia toa mahatsapa ny fotoana tsara indrindra hanitarana ny fahatongavanay hatrany hatrany amin'ny mpihaino diaspora faobe izay mitady hatrany ny atiny any an-toerana. Mihevitra izahay fa ny fandaharan'asa tanora sy haino aman-jery samy hafa dia hisolo toerana ireo mpihaino ireo ary ny tarika Ethnic Channels no mpiara-miombon'antoka tonga lafatra manampy antsika hahatratra izany. "
fampitana injeniera fampitana Engineering Cobalt Encoder Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor OTT TV Technology Ultra HD Forum Video injeniera	2019-11-08
Previous: Stylist volo
Next: PIX sy CODEX marika hiray hina eo ambany vondrona media X2X